Jessie gacamo - Ilmaha - Qaabka PDF tolidda - Tailoress The
Home / Ilmaha / gacamo / Jessie gacamo – Ilmaha – Qaabka PDF tolidda
Yaa ma jecla gacamo? Waxay had iyo jeer waa raaxo iyo tagaan wax! Haddaba waxaad iyaga ku astaysto oo sinaba aad rabto in aad! Sidaas dheer sida dhar ah waa stretchy aad u celin karaa labada ciyaaryahan cusub oo gacamo.
Tani waa qaab aad u fudud. Labada lugood waa la wada baabbi'iyey ka mid gabal dhar la kaliya lugta iyo maro tollayn gudaha loo tolo. xitaa waxaa jira suunka lahayn! Waxaa la abuuray by ilmadu sare ee gacamo ah.
Ma u baahan tahay gacamo in si dhaqso ah? Tani waxay hubaal waa naqshad!
Categories: Ilmaha, Carruurta, gacamo, gacamo Tags: carruurta, gacamo, xagaaga, surwaal, jiilaalka
child ages newborn / 3 bilood / 6 bilood / 9-12 bilood
qiyaastii. 50cm 1cm wide elastic